7 तरिकामा गर्न रहो स्वस्थ यात्रा गर्दा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >7तरिकामा गर्न रहो स्वस्थ यात्रा गर्दा
वर्तमान संग coronavirus को प्रकोप (Covid-19) disarray मा सबैको यात्रा योजनामा ​​फालिएको, यसलाई यदि तपाईं पर्छ जान्न गाह्रो हुन सक्छ coronavirus समयमा आफ्नो छुट्टी राख्न कि हैन. जबकि हामी तपाईंलाई यसलाई जारी राख्न चयन भने तपाईंको लागि भनेर निर्णय गर्न सक्दैन तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य रक्षा गर्न चरणहरू हुनुहुन्छ निश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण. अन्त गर्न, यहाँ छन्7मद्दत यात्रा सुझावहरू तपाईंलाई स्वस्थ गर्दा परिभ्रमण रहन.
नम्बर यात्रा गर्दा स्वस्थ रहन 1: आफ्नो हात धोऊ
यो एक स्पष्ट लाग्न सक्छ, तर आफ्नो हात धोइदिनुभएर आफैलाई स्वस्थ राख्न सबैभन्दा राम्रो तरिका को छ. किन? यस अनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा, “आफ्नो हात वाशिंग राम्ररी माटो हटाउँदछ, भाइरस, र जीवाणुहरु अन्य मानिसहरू र वस्तुहरु गर्न फैलाउने तिनीहरूलाई रोक्न, यस्ता खाना विषाक्तता रूपमा रोगहरूबाट फैलाउन सक्छ, फ्लू वा पखाला. यसलाई संक्रमण टिप्ने र अरूलाई तिनीहरूलाई फैलाउने देखि रोक मान्छे मदत गर्न सक्छ”.
बस राख्न, हात धुने तपाईं दिन भर जम्मा सबै gook छुटकारा हुन्छ. यो विशेष गरी लागि उचित छ यात्री. पर्यटक साइटहरु संसारभरिका मानिसहरूलाई को hordes भरिएका छन्. प्रति दिन एक हजार मानिसहरू एक ढोकाको चुकुल छोएर भने, र बस एक आफ्नो हात धोए छैन, लाग्छ यो कसरी फोहोर हुनुपर्छ!
तपाईं पर्याप्त चलिरहेको पानी वा साबुन बिना एक क्षेत्र हुनुहुन्छ भने, तपाईं पनि नियमित पक्का किनेको र प्रयोग गरेका छन् हात प्रक्षालक बनाउन आवश्यक छ. जबकि पनि अक्सर प्रयोग भने यो तपाईंको हात बाहिर सूखी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ मइस्चराइजिंग घटक समावेश हात प्रक्षालक को संस्करण तपाईं सफा हात र नरम छाला हुन सक्छ त पनि छन्.
यो लामो नकारात्मक पर्याप्त सुतिरहेको छैन प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित कि ज्ञात भएको. छुट्टी मा गर्दा यो सुरुतिर को दरार मा उठ र रात को बीचमा सम्म वरिपरि चलाउन एक राम्रो विचार जस्तै लाग्न सक्छ. तथापि, सत्य पर्याप्त निद्रा प्राप्त अधिक प्रभावशाली लाग्छ चाहन्छु भन्दा छ कि छ. रातमा, हाम्रो शरीर rejuvenate र पनि निको समय लाग्छ. तपाईं निदाउनु हालतमा खर्च कम समय कम समय तपाईं आफैलाई हेरचाह गर्न सक्षम.
वास्तबमा, अध्ययन पनि छैन निद्रामा पर्याप्त गर्नेहरू जस्तै उच्च रक्तचाप र स्मृति हानि रूपमा नकारात्मक प्रभाव चिरकालीन ग्रस्त गर्न सक्छन् भन्ने देखाएका छन्. यी प्रभाव मात्र यात्रा गर्दा compounded गर्न सकिन्छ, त्यसैले आफैलाई एक अनुमोदन गर्न र सात घण्टा एक रात को एक न्यूनतम लागि घास मारा निश्चित.
जबकि तपाईको zzz मा प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ यदि तपाईंले धेरै स्थानान्तरण गर्नुभयो भने समय क्षेत्रहरू र जेट ल्यागबाट पीडित छन्, तपाईं आफ्नो शरीर आराम मदत र निद्रामा गर्न बन्द बहाव धेरै फरक तरिका प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. यी न्यानो शवर वा स्नान समावेश, लैवेंडर-सुगंधित स्प्रे, मनन, र पनि चिया को न्यानो कप. छोटकरीमा, निद्रामा प्रशस्त प्राप्त तपाईं यात्रा गर्दा स्वस्थ रहन मद्दत गर्न imperative छ.
मार्सिलेजबाट ल्योन ट्रेन टिकटहरू
पेरिसबाट ल्योन ट्रेन टिकटहरू
यात्रा गर्दा स्वस्थ रहन अनि ट्याप जल जोगिन
तपाईं कतै एकदम अज्ञात शीर्षक हुनुहुन्छ भने, यो तपाईं ट्याप पानी बच्न आवश्यक छ कि स्पष्ट हुनुपर्छ. किन? किनभने स्थानीय पानी भित्र जीवाणु क्षेत्र विशेष हो, र / वा पेट जीवाणुहरु तिनीहरूलाई ह्यान्डल गर्न सबै तयार मा छैनन्. प्रति वर्ष हजारौं बिरामी पिउने स्थानीय पानी प्राप्त, यस्तो उल्टी र पखाला धेरै साधारण रूपमा प्रभाव संग. टिप रूपमा, तपाईं टाढा आफ्नो सान्त्वना क्षेत्र को बाहिर हुनुहुन्छ जब पानी बोतल गर्न छडी. यो sketchy स्वच्छता अभ्यासहरू साथ स्थानहरू लागि डबल्स जान्छ. अन्य कम विकसित देशहरूमा रूपमा शौचालय सेवा स्थानहरू नै स्रोतबाट खानेपानी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. हो, एक कुरा हो!
पनि, पक्का राम्ररी हाइड्रेट बनाउन. तातो तापक्रम र कठिन गतिविधि पर्याप्त पानी पिउने बिना एक अस्पताल छिटो टिकट छन्.
तपाईंको सटहरू प्राप्त
तपाईं कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ आधारमा, तपाईं एक यात्रा क्लिनिक वा अन्य स्वास्थ्य हेरविचार केन्द्र मा विशेष शट प्राप्त गर्न आवश्यक. यो केही कम विकसित देशहरूको लागि विशेष गरी साँचो हो, यस्ता मलेरिया र पहेंलो ज्वरो रूपमा अझै पनि खेल रोगहरूबाट. तपाईं आफ्नो यात्रा मा बाहिर टाउको अघि, रोग नियन्त्रण र रोकथाम को लागि केन्द्र जाँच (सीडीसी) वेबसाइट. यहाँ के तपाईं यात्रा गर्दै छन् जो देश को लागि विशिष्ट आवश्यकताहरु पाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका देखि हुनुहुन्न भने, तपाईं पनि आफ्नो स्थानीय वेबसाइट जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, को एनएचएस जस्ता, आवश्यकताहरू स्वस्थ यात्रा को लागि आफ्नो लागि.
स्वस्थ रह: तपाईंको अनुहार छुनुहोस् छैन
हामी पहिले नै हात धुने बारेमा कुरा गर्नुभएको रूपमा, अब यसलाई आफ्नो अनुहार बारेमा कुरा गर्न समय. अक्सर तपाईं मान्छे आफ्नो हात मा आफ्नो टाउको आराम देख्नुहुने, एक चिलाउनु scratching, अन्यथा आफ्नो अनुहार छोएर. यसलाई तोड्न तर तपाईं स्वस्थ गर्दा परिभ्रमण रहन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो अनुहार देखि टाढा आफ्नो हात राख्न कठिन बानी छ.
यसलाई साधारण अर्थमा छ, आफ्नो हात दिन भर धेरै कुराहरू छुन रूप. एक मा रेल वा विमान, तपाईं ट्रे तालिका छ छौँ, को seatbelt. र विभिन्न अन्य साधारण ठाउँ क्षेत्रमा तपाईं हुनुहुन्छ हृदयस्पर्शी. के तपाईं आफ्नो हात हरेक समय धोइदिनुभएर हुनुहुन्छ सम्म केहि स्पर्श (वा पन्जा लगाएका गर्न हुन), यो सबै समय आफ्नो अनुहार बन्द आफ्नो हात राख्न राम्रो विचार छ.
यो तपाईं छुट्टी मा गर्दा राम्रो खान जाँदै हुनुहुन्छ अर्थमा बनाउँछ, दायाँ? जे भएपनि, के चकलेट र churros बिना स्पेन छ, र कस्तो baguette बिना फ्रान्स छ? यो हामी के मतलब छैन, तथापि.
स्वादिष्ट खाना सबै राम्रो छ र राम्रो छ, तर तपाईं साथै स्वस्थ खाना हुनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्न आवश्यक. खाना पिरामिड पालना र लागि केही समय मा एक पटक हरेक greens ती गहिरो-तला उपहार बाहिर स्विच. तपाईं यसलाई लागि कोठा छ भने, राख्न तपाईं संग भिटामिन ल्याउन आफैलाई माथि टन्न भरेर. भिटामिन सी ल्याउन निश्चित, probiotics, र अन्य भिटामिन-गर्न-सजिलो उपभोग.
यो सबैभन्दा सान्दर्भिक छ यात्रा गर्दा रक्सी पिउने साथै. यो राम्रो तरिकाले धेरै रक्सी पिउने एक कम प्रतिरक्षा प्रणाली सक्छ कि चिनिने (र केही दुष्ट hangovers). तपाईं प्राप्त बिरामी जोगिन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने, निश्चित तपाईं न्यूनतम आफ्नो रक्सी खपत राख्न. जे भएपनि, जो एक सामान्य चिसो संग मोना लिसा भ्रमण गर्न चाहन्छ?
पछिल्लो रहो स्वस्थ सुझाव: तपाईंको स्थान सफा
यो एक परेशानी हुन सक्छ, तर यो गरेको लायक तपाईं संग केही disinfecting पोंछे ल्याउन तपाईं जब यात्रा. किन? हामी पहिले नै उल्लेख गर्नुभएको सबै ती ट्रे टेबल र सिट सफा गर्न. Clorox पोंछे थोक मा खरिद गर्न सकिन्छ र ziplock बैग हालिदिए. तपाईं त तिनीहरूलाई आफ्नो लैजाने सँग ल्याउन सक्छ.
को armrests हटाउन निश्चित, seatback खल्ती (तपाईं एउटा छ भने), र मदत गर्न आफ्नो निस्संक्रामक संग पनि seatbelt कस्नु सुनिश्चित आफ्नो क्षेत्र रहता सकेसम्म सफा रूपमा.
लगभग केहि भन्दा प्राय यात्रा गर्दा मानिसहरू बिरामी. अरू सबैलाई जस्तै छैन. आफैलाई र प्रयोग हेरविचार एक ट्रेन सेव!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “7 तरिकामा गर्न रहो स्वस्थ यात्रा गर्दा” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/stay-healthy-while-traveling/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#सफ्ट्राभेल europetravel स्वस्थवत्र trainjourney रेल यात्रा ट्राभलसेफ